ချက်တင်ကစားတဲ့အွန်လိုင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများ - ဗီဒီယိုချက်တင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့!
Ny daty Corrientes. Maimaim-poana Ny Mampiaraka Toerana, tsy Misy
ဘယ်မှာတွေ့တဲ့မိန်းကလေးက ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူအွန်လိုင်းအဆိုပါဖုန်းနံပါတ် ၁၈ ဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့အွန်လိုင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ။ အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ